Da'dee ayey ku habboon tahay in dhallintaadu ay bilaabaan inay arkaan dhakhtarka haweenka?
Dooro Language English Carabi Chinese (La fududeeyay) Japan Spain somali
Dr. Kevin Hackett
Dr. Ann Marie Wurst
Dr. Amy W. Rahl
Dr. Carrie Soder
Dr. Joanna Buell
Dr. Erika Boothman
Dr. Lauren Sagaria
Dr. Alexandra Schueler
Khabiir Kalkaaliye Caafimaad
Kooxda Kalkaaliyaha Caafimaad ee Sare
Uurka & Uurka
Tijaabinta Uurka kahor
Nafaqada & Jimicsiga
Shaqada & Gaarsiinta
Guudmarka dhalmada kadib
Murugada umusha ka dib
Daryeelka Caafimaadka Haweenka
Daryeelka Dumarka Fiican
Guudmarka Daawada Taranka
Qalitaanka Qalitaanka Robotka
Ka taxadaritaanada covid19
Su'aalaha la Weydiiyo Haweenka
Uurka & Macluumaadka Uurka
Macluumaadka dhalmada dhalmada kadib
Foomamka Bukaanka Guud
Siyaasadaha Guud ee Bukaanka
Siyaasadaha Maaliyadeed ee Uurka
Fasallo ficil ah
Ku Dhaqanka La Xiriirinta
A imtixaan dumar fiican waa baaritaan dhameystiran oo ka caawiya dhakhaatiirteena qiimeynta caafimaadka dumarka da'da yar ee Ohio. Tani waa tallaabo muhiim ah oo looga hortagayo haweenka da 'kasta leh maadaama ay iska baarayaan kansarka iyo cudurada haweenka ku dhaca. Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, waxaan leenahay koox dhakhaatiir ah oo ka dhigi kara ballanta ugu horeysa ee dumarka si aan looga xumaan dhalinyarada. Booqashadani waa mid muhiim ah maadaama ay ku siineyso waqti aad wax badan kaga ogaato baaritaanka cudurada haweenka iyo inaad weydiiso su'aalo ku saabsan qaan-gaarnimada, caadada, xakameynta dhalmada, iyo galmada. Waxaan sidoo kale ka wada hadli karnaa kahortagga iyo baaritaanka cudurada galmada lagu kala qaado Columbus, Dublin, iyo Westerville, OH.
Goorma ayey tahay in booqashada dhakhtarka dumarka ee ugu horreysa ay ahaato?
Waxaan kugula talineynaa in ballanta ugu horeysa ee dumarka ay ka dhacdo bartamaha dhallinta, badiyaa inta udhaxeysa 13 ilaa 15 sano jir. Badanaa, baaritaanka miskaha looma baahna booqashada ugu horreysa, marka tani waa inay ku siisaa ilmahaaga xoogaa xasilloon maskaxeed. Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka, waxaan rabnaa bukaankeena yar yar inay ku dareemaan raaxo xafiisyadeena iyo daryeelka dumarka. Waan ka jawaabi karnaa mid kasta oo ka mid ah su'aalahooda ka hor ama inta lagu guda jiro booqashadooda si aan uga caawino iyaga sidii ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
Maxaa dhacaya inta lagu guda jiro safarka dhakhtarka dumarka?
Ka dib markay kalkaaliye caafimaad qaado dhererkaaga, miisaankaaga, iyo cadaadiska dhiiggaaga, waxaa jira talaabooyin kale oo lagu dari karo ballantaada dumarka ah ee Columbus, Dublin, ama Westerville, OH, oo ay ka mid yihiin:
Doodda taariikhda caafimaadka: Halkani waa halka aan ka wada hadli doonno inaad caadada qabto iyo haddii aad wax xanuun ama raaxo ah ku qabtid naasahaaga ama xubinta tarankaaga.
Baaritaanka naasaha: Tani waxay ka caawineysaa dhakhtarka dumarka inuu raadsado nudaha aan caadiga ahayn, dheecaanka, ama buro.
Imtixaanka miskaha: Had iyo jeer sidan kuma qabanno booqashadaada ugu horreysa ee dhakhtarka dumarka, laakiin tani waxay u egtahay wax aan caadi ahayn oo ku yaal faruuryaha taranka, xubinta taranka haweenka, xubinta taranka dumarka, makaanka afkiisa, makaanka, ama ugxan sidaha
Baaritaanka Pap smear: Kani waa baaritaanka kansarka xubinta taranka dumarka oo aan had iyo jeer lagu sameynin baaritaan kasta. Si kastaba ha noqotee, waa aalad ka hortag oo muhiim u ah caafimaadkaaga.
Xakamaynta dhalmada: Haddii aad xiiseyneyso xakameynta uurka, waxaan kugula talin karnaa caafimaadkaaga galmada.
Imtixaanka STD: Tani waa ikhtiyaari waxayna naga caawineysaa inaan iska baarno soo-gaadhista STD.
Tallaalada: Tallaalka HPV wuxuu caawiyaa ka hortagga kansarka xubinta taranka dumarka.
Inta lagu guda jiro booqashadaada hore, waxaan si adag uga shaqeyn doonnaa sidii aan xiriir adag kuula yeelan lahayn si aad ugu raaxaysato ka wada hadalka wixii su'aalo ah ee aad hayso. Ugu dambeyntiina, inta aad daacad ka tahay, daryeelka fiican ayaan kaa siin karnaa Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka.
Ma waxaan u baahanahay in lay baaro
Haddii aad la kulanto calaamado ina khuseeya, dhakhtarkaaga dumarka ayaa kugula talin kara baaritaanno. Haddii aad galmo firfircoon la leedahay lamaanayaal badan, waxaan kugula talin karnaa baaritaanka STD. Ka dib markaad gaarto 21, waxaad bilaabeysaa in lagaa qaado baaritaanka PAP, oo kaa baaraya kansarrada kala duwan. Mammogram-ku wuxuu bilaabmaa qiyaastii 35 - 40, iyadoo kuxiran taariikhda qoyskaaga iyo arrimo kasta oo khatar kugu ah oo aad yeelan karto.
Maxaa laga filan karaa ka dib baaritaankaaga dumarka ah
Marka baaritaanka jireed uu dhamaado, waxaan qaadaneynaa waqti aan kaga jawaabno wixii su'aalo ah ee aad ka qabto caadadaada, caafimaadkaaga galmada, ama xakameynta dhalmada. Waxay kuxirantahay natiijooyinka baaritaankaaga caafimaad iyo wixii baaritaano ah ee aan sameynay, waxaan kugula talin karnaa xoogaa talo ah. Haddii aad hesho caadadaada, waxaan kugula talineynaa inaad jadwal u sameyso baaritaankaaga maalin aadan qabin caadadaada, ama ugu yaraan markay iftiin tahay, inaad dhibaato ka haysato dhiigbaxa mooyee. Sababtoo ah booqashadaada ugu horreysa ee dhakhtarka dumarka waxay noqon kartaa mid neerfaya, samee liis su'aalo ah inaad naweydiiso kahor baaritaankaaga dumarka si aadan waxba u ilaawin.
Jadwal u samee safarkaaga ugu horeeya dhakhtarka dumarka ee Dublin, OH
Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, waxaan ku hageynaa gabdhaheena bukaan socodka ah safarkooda caafimaad. Waxaan fahansanahay inay dhib ku tahay baaritaankaan ama baaritaanadan, laakiin muhiim ayey u yihiin caafimaadkaaga. Hadafkeenu waa inaan kaa dhigno sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah markaad noo soo booqato daryeelka haweenka. Si loo ballansado imtixaan haween ah, call xafiisyadayada Columbus, Dublin, ama Westerville, OH, maanta.
Daryeelka Dumarka Fiican Dulmarka Haweenka
3 Wadarta Faallooyinka
Goobta Columbus Goobta Westerville Goobta Dublin
921-B Jasonway Ave
430 Altair Pkwy
6870 Wareeg Dr.
Maxaan filayaa inay dhacaan inta lagu jiro Baadhitaanka Mammogram-ka ogaanshaha?
Mammogram-ka ogaanshaha ayaa si badbaado leh u ogaan kara calaamadaha kansarka naasaha. Baro waxa aad filan karto marka aad ka qayb galayso balamaha mammogram ee xafiiskayaga horumarsan.
Maxaan ugu Baahanahay La -talinta Caadada?
10 / 21 / 2021
Calaamadaha menopause sida dhididka habeenkii iyo soo ifbaxa kulul waxay faragelin karaan nolol maalmeedkaaga. Baro wax badan oo ku saabsan fursadahaaga iyada oo loo marayo la -talinta menopause.
Intee Jeer Ayaan U Baahan Yahay Inaan Helo Baaritaan Naag Wanaagsan?
Imtixaanka haweeneyda ladnaanta ayaa la qorsheyn karaa sanad walba ka dib marka haweeneydu ay gaarto 21 sano.
* Dhammaan macluumaadka waa la beddeli karaa. Sawirada waxaa ku jiri kara moodal. Natiijooyinka shaqsiyeed lama hubo oo way kala duwanaan karaan.
921-B Jasonway Ave Ste B
430 Altair Pkwy Ste A
6870 Wareeg Dr Ste A
© 2021 Xirfadlayaal Caafimaadka Haweenka | Asturnaanta & Diidmada | Waxaa ku shaqeeya DoctorLogic